Fianarantsoa : Fizahantany mitondra mpitsidika vaovao sy hafa mihitsy
Ambalakely, Soatanana ary Ambohimahamasina, ireo toerana ara-pizahantany mivoy an’ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe “Tourisme solidaire” eto Matsiatra Ambony. Tsy vaovao izy ireo amin’ny fitsidihana fa ny tombony amin’ity sokajy ity dia ny fampiantranoam-bahiny sy fampisakafoanam-bahiny ataon’ny fianakaviana tsotra amin’ireo toerana ireo.
Nomena fampiofanana eo amin’ny fahadiovana sy fidiovana ny tokantrano afaka mandray mpizahatany. Nohatevenina miaraka amin’izany ny fahaizamanao eo amin’ny fandraisam-bahiny sy ny nahandro avy any ivelany fa indrindra ny an’ny Malagasy. Tohanan’ny tetik’asa PROSPERER ny fikambanan’ireo mpitari-dalana tamin’izany fanofanana izany.
Marihina fa maherin’ny dimampolo no isan’ny vahiny vazaha tonga mijery ifotony azo fampiantranoana isaky ny toerana iray. Tolotra vaovao no aterak’izany eo amin’ny fizahantany satria mirotsaka mandray anjara amin’ny andavanandron’ny mponina eny antsaha ny mpizahatany mandritra ny fitsidihany. Mandray angady, manoto vary, sy mandray ravindena toy ny Malagasy rehetra monina amin’ny toerana lalovany izy ireo ao anatin’ny tolotra. Etsy an-kilany dia misy ny asa fampandrosoana tanterahana toy ny fananganana trano famakiamboky, ny fanohanana ara-pitsaboana, sns.
Mpandraharaha am-polony maro no efa miroso amin’io sokajy fizahantany io ankehitriny. Paikady iray lehibe ahafahana misintona sy mitazona vahiny maharitra eto Fianarantsoa no napetraka arak’izany.
Nampahafantarina ny zoma lasa teo ny mombamomba ity tolotra ity tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Ambalakely. Vina maharitra ny fanohizana azy amin’ny toeram-pitsidihana hafa eto an-toerana.
Pêche crevettière: Trafic de l'or blanc, personne n'en parle
ITM andiany faha 6 »